မော်နီတာအဟောင်းများ၊ တီဗီများကို ပြန်လည်အသုံးပြုနည်းနှင့် Flyback - Ikkaro ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နည်း
စတင်ပြုလုပ်ခြင်း >> အိုး၏အီလက်ထရောနစ်နှင့်စက်မှုပြန်လည် >> မော်နီတာအဟောင်းကို ပြန်လည်အသုံးပြုပြီး flyback ကို ပြန်ဖြုတ်ပါ။
ငါ သိမ်းထားတာ ကြာပြီ။ Samtron ကွန်ပြူတာ မော်နီတာ နှစ်ခု မှားယွင်းနေသည်။လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက မသိတာ။ ကနဦး အယူအဆမှာ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ပြုပြင်ရန် ကြိုးစားရန် ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် အခုခေတ်မှာတော့ ဒီလိုမော်နီတာတစ်လုံးရှိဖို့က အဓိပ္ပာယ်မရှိတော့ဘူး၊ အဲဒါတွေကို ဖြုတ်ပြီး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို သိမ်းထားတော့မယ်။
ပထမဦးဆုံးအရာက အဲဒါကိုဖွင့်ပြီး ဘာကိုမှမထိခင်မှာပါပဲ။ သောင်းနှင့်ချီသော ဗို့အား လွှင့်ထုတ်ခြင်းမျိုး မဖြစ်စေရန်အတွက် flyback အား ထုတ်လွှတ်ပါ။. လုပ်ဆောင်ချက်သည် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်ကွန်ဒင်ဆာကို ထုတ်လွှတ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သည့် လုပ်ဆောင်မှုနှင့် ဆင်တူသည်။ အဲဒါကို ကျွန်တော်တို့က ရှော့တိုက်တယ်။
ဒါပေမယ့် ကောင်းကောင်းမြင်နိုင်အောင် တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ချန်ထားခဲ့တယ်။
Flyback ကို ဘယ်လိုဖြုတ်မလဲ။
အမှန် ဖန်သားပြင်သည် ဒိုင်အီလက်ထရစ်အဖြစ် လုပ်ဆောင်သောကြောင့် အားသွင်းထားသည့်အရာမှာ flyback မဟုတ်ဘဲ အနက်ရောင်စခရင်၏အတွင်းပိုင်းဖြစ်သည်။.
သတိပြုရန်မှာ အန္တရာယ်ရှိသည်။. ရုပ်မြင်သံကြားကို လှည့်စားတော့မယ်ဆိုရင် လိုအပ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကြီးမားတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။ မှန်ကန်သောခြေအိတ်ကို သေချာယူ၍ မသေချာပါက ထားခဲ့ပါ။
ကြိုးတစ်ချောင်း၊ မိကျောင်းကလစ်အချို့နှင့် ဝက်အူလှည့်တစ်ချောင်းကို ယူသည်။ သတ္တုနှင့်ထိတွေ့စေရန် ဝက်အူလှည့်ပတ်ပတ်လည်တွင် ကေဘယ်၏အဆုံးတစ်ဖက်ကို ပတ်ပါမည်။
ပြုတ်ကျမသွားစေရန် လျှပ်စစ်တိပ်တစ်ပိုင်းဖြင့် ပြင်နိုင်သည်။
မော်နီတာဝန်းရံထားသော သံမဏိကြိုးများအနက်မှ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ချိတ်ထားမည့် မိကျောင်းကလစ်၏ အခြားတစ်ဖက်ကို မော်နီတာပတ်ပတ်လည်နှင့် ကိုယ်ထည်ပြုလုပ်သည့် မြေပြင်တွင် ချိတ်ထားသည်။
ယခု လက်အိတ်များကို အသုံးပြု၍ လက်ကိုင်မှ ဝက်အူလှည့်ကို အမြဲတမ်း ယူသွားမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ဝါယာရှော့ဖြစ်ကာ ဓာတ်မတည့်စေရန် ဖန်သားပြင်နှင့် နှာစေးနေသော ဖန်သားပြင်အတွင်းပိုင်းကို ထိလိုက်ပါမည်။
အလယ်ဗဟိုရှိ သတ္တုချိတ်ဆက်ကိရိယာကို ထိပြီး မျက်နှာပြင်မှ ဒိုင်လျှပ်စစ်ထုတ်လွှတ်ရန် အတွင်းတွင် ဝက်အူလှည့်ကို ထည့်သွင်းရပါမည်။
၎င်းသည် အန္တရာယ်ရှိသည်၊ သင်သတိထားရန် လိုအပ်ပြီး အရာအားလုံးကို ကောင်းမွန်စွာ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။
မော်နီတာအဟောင်းကနေ သိမ်းထားနိုင်တဲ့ အရာတွေ၊
Yoke နှင့် deflection coils များ
ကေဘယ်ကြိုးဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် tesla coil သို့မဟုတ် radio galena တစ်ခုပြုလုပ်နိုင်သည်။ အကွေ့အကောက်များသော သို့မဟုတ် သေးငယ်သော ဆားကစ်တစ်ခုကို တပ်ဆင်ရန် လိုအပ်သော အခြေခံမော်တာများ။
ဖန်သားပြင်မှန်သည် 20 - 40 kV အစီအစဥ်အတိုင်း ထုတ်ပေးသော အလွန်မြင့်မားသောဗို့အားကြောင့် ပြွန်အတွင်းထွက်ရှိသော x-rays များမှ ကာကွယ်ရန် ခဲဓာတ်များစွာပါရှိပြီး၊ မျက်နှာပြင်။
ဤပြွန်ဖြင့်၊ မော်နီတာသည် မိုနိုခရုမ်ဖြစ်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အီလက်ထရွန်အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းကို ပြုလုပ်နိုင်သော်လည်း ယခုအချိန်တွင် ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်မသိလိုက်ပေ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Flyback အကြောင်းပြောနေကြသည်။ ဤဆောင်ပါး. ဗို့အားမြင့်နဲ့ စမ်းသပ်မှုတွေ လုပ်ချင်တာကြောင့် မော်နီတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်အ၀င်စားဆုံးအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
ပျံသန်းမှုနဲ့အတူ ကျွန်တော်တို့ တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။ tesla ကွိုင် အခြားဗို့အားမြင့်စက်များ။ ၎င်းတို့သည် အလွန်လှပသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နေသည့် တင်းမာမှုများကြောင့် အန္တရာယ်ရှိသော စမ်းသပ်မှုများဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် သင်တစ်ခုခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် သင်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကို နားလည်ပြီး သင့်လျော်တဲ့ လုံခြုံရေးအစီအမံတွေကို လုပ်ဆောင်ဖို့ သေချာပါစေ။
ပြန်ကောင်းလာနိုင်တယ်။ ပါဝါအီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်းများစွာသည် အီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်းများ ဖြစ်သည်။ ပါဝါထောက်ပံ့မှု၏- mosfet နှင့် heatsinks၊ ထရန်စဖော်မာများ၊ diode တံတားများ၊ ပြောင်းလဲနိုင်သော resistors၊ တန်ဖိုးမြင့် potentiometer၊ mega ohm အကွာအဝေးရှိ။ မော်ဒယ်ပေါ် မူတည်ပြီးတောင်မှ၊
ပြန်မရောင်းရသေးတဲ့ ဒီအပိုင်းတွေကို ပြန်ရတာနဲ့တပြိုင်နက် မြင်အောင်ကြည့်ဖို့ ချန်ထားခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်သည် ပြွန် သို့မဟုတ် စခရင်ကို ဖြုတ်မထားပါ။ အဲဒါအတွက်၊ ပုလင်းရဲ့လည်ပင်းကို စိန်အပြားပြားနဲ့ ရနိုင်ရင် လေဝင်အောင် မတိုက်မိအောင် အချင်းဝက်နဲ့ ဖြတ်ရပါမယ်။ ဒီအပိုင်းကို Caesar ရဲ့ ဗီဒီယိုမှာ ကောင်းကောင်းရှင်းပြထားပါတယ်။
အပိုင်းများစွာကို ဆွဲထုတ်ရန် ဇယားကွက်တစ်ခုအဖြစ် ထွက်လာပြီး ဖန်သားပြင်ပေါ်ရှိ တိုက်ဆိုင်မှုများကို သင်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဒါပေမယ့် အမှန်တရားကတော့ အခုအချိန်မှာ အဲဒါတွေကို ပြန်ဆယ်ဖို့ စိတ်မဝင်စားဘူး။
ဖန်သားပြင်ပေါ်ရှိ phosphor ကဲ့သို့သော ကျွန်ုပ်တို့လျစ်လျူရှုထားသော ဤအပိုင်းအစများနှင့် ပစ္စည်းအချို့ကို သူပြန်လည်ရယူပုံကို ဗီဒီယိုတွင် တွေ့မြင်နိုင်သည်။
အမြဲလိုလို၊ ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ သတိထားပါ။ သိပ်မလိုအပ်ရင် သူတို့ကို ထားခဲ့ပြီး အဲဒါတွေကို ပြန်လည်အသုံးပြုဖို့အတွက် eco-park ကို ခေါ်သွားမယ်။
Exploded Image Gallery ကို ကြည့်ပါ။
ဤနေရာတွင် ဤစခရင်၏ အတွင်းပုံသဏ္ဍာန်ကို အသေးစိတ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
categories အိုး၏အီလက်ထရောနစ်နှင့်စက်မှုပြန်လည် လက်မှတ်အညွှန်း
1 Flyback ကို ဘယ်လိုဖြုတ်မလဲ။
2 စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်မှုအပိုင်း
2.1 Yoke နှင့် deflection coils များ
2.4 အီလက်ထရွန်းနစ် ပါဝါထောက်ပံ့မှု
4 Exploded Image Gallery ကို ကြည့်ပါ။